USherlock Holmes wonke umntu. Ubuso obuninzi bomcuphi owaziwayo | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Iincwadi zoLutsha, Inoveli emnyama
Ubuso obuninzi bomcuphi odumileyo waseNgilani
A USherlock Holmes akukho sidingo sokuyivelisa. Umphenyi odumileyo, owenziwe ngu mhlekazi UArthur Conan Doyle, yinxalenye yokucinga okuhlangeneyo kwendalo iphela. Ubuso babo buninzi njengabafundi babo. Kwaye iinguqulelo (ezithembekileyo okanye ezingekho) zamabali abo azinakubalwa cinema, umabonwakude kunye nayiphi na ifomathi sifuna ukucinga. Ndiza kuya ngaphaya kwabo. Ukusuka kwelona yamandulo ukusuka kwi-cinema ukuya kwelona kule mihla, eguqule umlinganiswa ngaphandle kokutshintsha ubungakanani bayo iota enye. Ewe kunjalo abantwana nolutsha. Ukusuka kumabonwakude wam othandekayo waseJapan uSherlock ukuya ku-Isaac Palmiola othandekayo uPerrock kunetha kakhulu, kodwa intsomi iyaqhubeka. Mayibe ziinguqulelo ezininzi ngakumbi. Eli nqaku linikezelwe kuSara, enye yevenkile endizithandayo.
1 Holmes kwiimuvi
2 IHolmes yenkulungwane yama-XNUMX
3 Olona Holmes lobuntwana nolutsha
3.1 USherlock, uLupine kunye nam- u-Irene Adler
3.2 UPerrock Holmes - uIsaac Palmiola
Akukho mntu ubhetele kuno Umdlali waseBritane ukuyizisa ebomini kwiscreen esikhulu. Kwaye kumagama amakhulu awaboleka yena, ndishiyeke nobuso nobuhle bomdlali weqonga woMzantsi Afrika Umtya weBasil. Iifilimu ezilishumi elinesine azidubula phakathi kuka-1939 no-1946 ecaleni kukaNigel Bruce njengoGqirha Watson wamnika udumo lwehlabathi.
Okungenakuthelekiswa nanto UPeter Cushing Ukwanike umzimba wakhe othile kuhlobo lwe Inja yeBaskervilles wenza ntoni umvelisi wodumo I-Hammer. Kwaye emva koko uthathe ngaphezulu kweminyaka emithathu kwi Serie ukusuka kwi-BBC eyayiqale ngo-1964. Wayidlalela iziqendu ezili-16. Kodwa ngokuchanekileyo kwi Inja yeBaskervilles U-de la Hammer wadibana nenye enkulu, UChristopher Lee, eziya kuba ziiHolmes kwii-60s.
Elokugqibela kwaye, ewe, igama elidumileyo lase-Bhritane eliye labanika ubomi lelinye mhlekazi, Ian McKellen, ethi ngo-2015 iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde iphinde isetyenziswe kwakhona UMnu Holmes.
IHolmes yenkulungwane yama-XNUMX
KwakungumMerika URobert Downey Jr. yintoni ndawonye UYuda umthetho njengoWatson banike abalinganiswa bakaDoyle ezinye ezimbalwa, masithi, iinkalo ezikhawulezayo. Isandla somlawuli naso sanegalelo koku Guy Ritchie, ukuba ngoMthetho, babeka isabelo saseBritane.
Kodwa ibikumabonwakude apho kwakhona i-BBC Wahlamba ubuso wambuyisa kwimihla yethu. ISerie USherlock nobuso be UBenedict Cumberbatch kunye noMartin Freeman ziiHolmes kunye neWatson ze izizukulwana ezintsha. Kwaye ikwayimpumelelo ukubasondeza kwinto engafiyo yokubhala kaDoyle. Nokuba ndisebenzisa iselfowuni kunye ne-intanethi.
Olona Holmes lobuntwana nolutsha
Oko kum kukuba perro krelekrele kakhulu ngelizwi elimangalisayo lomdlali weedubbing we Iingqungquthela ze-80s ze-anime series. Phakamisa isandla sakho ongakhange acule eyakho iswitch ngonaphakade. Eyona nto intle kakhulu kukuba abatshana bam abaneminyaka emi-6 kunye ne-4 ubudala baqhubeke nokuyicula ngoku, kwaye kungekudala bazakuqala ukufunda iihambo zabo. Izinto eziza kuqhubeka ziphinda ziphinde ziphinde zenziwe kwiincwadi ezimbalwa ezilungele abafundi abancinci.
USherlock, uLupine kunye nam- u-Irene Adler
van Izihloko ezingama-10 Sele ivela kule ngqokelela ijolise kubafundi Ukususela kwiminyaka esi-8. Eyokugqibela yaphuma ngoMatshi, Inkosi yolwaphulo-mthetho.
Le projekthi ikhokelwa ngumbhali wase-Italiya PD Baccalario, ibhalwe ngu UAlessandro gatti (phantsi kwegama elingu-Irene Adler) kwaye iboniswe ngu Iacopo Bruno. Inxalenye yesiseko se- bekuza kwenzeka ntoni ukuba aba bantu bathathu baziwayo badibene ebutsheni babo kwaye iindlela zabo ngeza zawela.
UPerrock Holmes - uIsaac Palmiola
Le saga ithwala Izihloko ezingama-5 sele ijolise kubafundi ukusuka kwiminyaka engama-5. Umlinganiswa ophambili sisilwanyana sasekhaya uJulia noDiego abakwaziyo ukuba naso. Igama lakhe nguPerrock, Perrock Holmes, kwaye kude nokuba yenye nje ipokotho, unamandla okufunda iingcinga zakhe nabani na okrwempa isisu sakhe.
Umbhali weBarcelona U-Isaac Palmiola ubethe amanqaku kolu lonwabo luhle kwiklasikhi yeklasikhi.
1. Ababini kunye nesiqingatha sabacuphi
2. Iithambeka kuzo zone iine
3. Elemental, Gatson othandekayo
4. Impama kunye neenkanunu
5. Nanku uGatson evaliwe
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » Inoveli emnyama » USherlock Holmes wonke umntu. Ubuso obuninzi bomcuphi owaziwayo
UJeremy Brett wayengekho. Kakhulu kangangokuba kuye kwafuneka ndiphinde ndiyifunde le post ukuze ndiqiniseke ukuba andiyiphosanga ngengozi. Okwangoku andiqinisekanga, ingqondo yam ayiyi kwamkela ukuba uJeremy Brett akekho kwisithuba malunga noMnu Holmes kunye nokulungelelaniswa kwakhe. (Ke okanye ngaphezulu fangirl)
Emva kolo fikelelo lobunzulu bokuqala, ndiza kubonisa ukuba ithi inkulungwane XIX endaweni ye-XXI kwaye ndiyalithanda inqaku. Ndabona uPeter Cushing kwiHound yeBaskervilles kodwa hayi kuthotho lwe-BBC. Ndiyibhala phantsi ngelinye ixesha.
Enkosi ngengcaciso yakho, Lilykerry. Ukulungisa loo ntonga yamaRoma yangqungqa ngenkulungwane.
Ngelishwa kuye kwafuneka ndenze ukhetho phakathi kobuso obuninzi kangaka kuHolmes. Umntu kwakufuneka asilele kum kwaye yayilixesha elibi likaBrett.
Kwakhona, enkosi kakhulu.